ERDOGAN oo wada-hadallo lama filaan ah la yeeshay hoggaamiye ay xifaaltamaan - Caasimada Online
Home Dunida ERDOGAN oo wada-hadallo lama filaan ah la yeeshay hoggaamiye ay xifaaltamaan
ERDOGAN oo wada-hadallo lama filaan ah la yeeshay hoggaamiye ay xifaaltamaan
Ankra (Caasimada Onine) – Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan ayaa wada-hadal qadka taleefoonka ah la yeeshay hogaamiyaha dhabta ah ee Imaaraadka ahna Dhaxal Sugaha Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, sida uu sheegay Xafiiska Erdogan.
“Xiriirka u dhexeeya dalalka iyo arrimaha gobolka ayaa looga hadlay wada-hadallada,” ayaa lagu yiri war kasoo baxay xafiiska Erdogan oo looga hadlay wicitaankiisa Sheekh Maxamed.
“Qof walba waxay dani ugu jirtaa in la raaco siyaasad ku salaysan heshiis halkii laga samayn lahaa siyaasad ku salaysan khilaaf. Sababtoo ah tan dambe waxay leedahay kharash. Tanna horana waa horumar muhiim ah,” ayuu yiri sarkaal sare oo Turki ah oo ka hadlay wadahadaladii u dambeeyay.
Wakaaladda wararka Imaaraadka ee WAM ayaa sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadleen “rajada laga qabo in la xoojiyo xiriirka labada ummadood si loogu adeego danahooda guud iyo labadooda shacab.”